Chung-Ang University - Fianarana ambony ao Korea Atsimo
fanafohezan-teny : Cau
Aza adino ny miresaka momba Chung-Ang University
Hisoratra anarana sy Chung-Ang University
Chung-Ang University dia tsy miankina amin'ny andrim-panjakana 30,000 mpianatra ary 982 mpikambana ao amin'ny sampam-pianarana. Izany dia ahitana ny 10 undergraduate oniversite ary 16 nahazo diplaoma sekoly. Tsy miasa roa campus, ao Seoul sy Anseong, Korea.
hampitoerina amin'ny 1918, Cau miaritra ny mafy amin'ny alalan'ny Mazava ho azy fa ny ankehitriny ny Korea tantara, manohana ny lafatra ny "Fahamarinana sy Rariny". Nanomboka tamin'izay, Cau efa mpitarika nikarakara anjara eo amin'ny avara-pianarana ao amin'ny firenena. Hajaina toy ny mpitarika rafitra fanomezana kalitao fampianarana, Cau nanafaingana ny dian'ny zava-baovao ao an-toerana fanabeazana.
Tanteraka accreditied ny Ministeran'ny Fanabeazana ny Korea, Cau manolotra isan-karazany ny mari-pahaizana licence, tompony ary doctorat dia fandaharan'asa anisan'izany ny lalàna sekoly, Global MBA fandaharana sy ny mpitsabo sekoly. Noho ireo sekoly 'asa mavitrika, Cau Nahazo fankatoavana ambony ao amin'ny firenena avy amin'ny MEST ho valo taona farany.
koa, Cau dia fantatra ho ny firenena tsara indrindra any an-tsaha ny fivarotam-panafody, kolontsaina sy zavakanto ny fanabeazana. Miaraka amin'ny fanampian'ny ny sekoly ny zavakanto sy ny kolontsaina, ny anjerimanontolo mitsangana eo anivon'ny kolontsaina ny Koreana onja, amin'izao fotoana izao sy any an-dafin'i mamafa Asia.
Amin'ny maha-lehibe tsy miankina andrim-panjakana, Chung-Ang University tanteraka nanao ny mitarika ny Koreana sy ny iraisam-pirenena ny mpianatra sary an-tsaina ny fiainany sy hanatanteraka ireo tanjona ambony indrindra mety eo amin'ny fiaraha-monina maneran-miha fifaninanana.
Business & toekarena
Dr. Bum Hoon Park Natokana ho ny faha-12 ny filoha tamin'ny Febroary University 2005. Araka ny asa voalohany eo amin'ny fifidianana, dia nanara-maso ny fanombanana ny Koreana Council for University Fampianarana, barotra ny Renivohitra, BK21, fametrahana ny Professional Graduate School ny Lalàna, ary ny hafa firenena orinasa.
Fanavaozan-drafitra ny Fanabeazana Siansa Teknolojia Faculty, izay efa olana lehibe indrindra mbola miandry, Tena nahomby dia nanendry mpitarika oniversite sy nahazo Grant fikojakojana (KRW 9,100,000,000) mitovy amin'ny ny an'ny mpifaninana lehibe anjerimanontolo, na dia eo aza ny ny 1 fotoana fizahan-taona.
Taorian'ny ny fanavaozan-drafitra ny undergraduate fandaharana, fiantsoana ho miaramila vaovao Admissions, fanoratana ny mpianatra amin'izao fotoana izao, ara-bola amin'ny ankapobeny ny fitantanana zava-misy sy firaketana an-tsoratra ao amin'ny sekoly sy ny matihanina telo 11 manokana ny sekoly, dia nanadihady ny hamantatra ny faritra ho fanatsarana sy hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Noho izany, 32 avy amin'ny 42 mpiasa matihanina avy amin'ny sekoly sy ny sekoly manokana ary nafindra any amin'ny ankapobeny nahazo diplaoma sekoly, ary 10 toerana mihena. Notendrena ireo mpikambana amin'ny ankapobeny no nahazo diplaoma sekoly-manome mba ho maodely ny Kilonga eo amin'ny namorona ny Research Group Priority (Staff), fa ny fanorenana ny fikarohana-centric fitondrana.
Dragon 2018(2001-2004), izay nikasa ny drafitra fampandrosoana ny faha-11 eo ambany filohan'ny oniversite mba hitondra ny anjerimanontolo mankany amin'ny oniversite tanjona fahitana, dia tamin'ny fahazato taonan'ny Anniversary, dia indray-marika ho CAU2018 +(2005-2008). CAU2018 + ny lisitry ny tombany indostria isan-karazany ny Foto-kevitra sy ny loharanom-andrasana fidiram-bola amin'ny an-tsipiriany. Mba hanatanteraka ny tanjona, CAU2018 + dia ampiharina amin'ny dingana roa.
Fa ny efa-taona voalohany ny Dr. Bum Hoon Park ny teny amin'ny birao, ireo fitaovana mavesatra vola amin'ny fampianarana / fikarohana fitaovana. Noho izany, ny firenena lehibe indrindra dia naorina ny Efitrano Lalàna tamin'ny Febroary 2007, ary ny tompony nosarihana niakatra drafitra ho an'ny fanorenana ny Pharmacy sy Natural Science R&D Foibe manodidina ny Main Fidirana ao amin'ny Campus 1, ary ny Engineering R&D Center ny kianja mitafo,
In 2008, ny Media Practice Section dia naorina teo an Hall sy ny Lalàna 400 fanampiny paroasy dia nanampy tao amin'ny hopitaly Affiliate. Koa, Ny Chung-Site Construction Plan, tafiditra ao amin'ny CAU2018 + Development Plan dia efa napetraka tany mihetsika.
Tamin'ny volana Novambra 2007, dia nahazo alàlana avy amin'ny Hannam-si, noho ny fampivelarana ny fahatelon'ny lanjan'ny, Hannam Campus. Camp Colbern, izay aloha ny US Army instillation ny 86,000 pyeong dia nohavaozina ho fitoriana. Ny ekipa ho hofehezina izy isaky ny foto-kevitra an-tsaha mba hiandraikitra ny fitantanana.
244 fampianarana manontolo andro no nanakarama mpiasa teo anelanelan'ny 2005 ary 2009, ary ao ny enim-bolana voalohany amin'ny 2009, 25 manontolo andro sy ny ampaham-potoana dia nanakarama mpiasa.
Lalàna sy ny Fitsaboana Sekoly niorina tamin'ny volana Martsa 2009.
KRW 40 lavitrisa ny fampandrosoana vola, KRW 166.3 lavitrisa ny fikarohana ivelany Grant, ary KRW 17.3 lavitrisa ao amin'ny governemanta omena fanampiana toy ny governemanta-vatsian'ny orinasa no antoka nandritra ny 4 taona nanomboka tamin'ny Dr. Bum Hoon Park ny fanokanana ho birao. Ny isan'ny KRW 223.6 lavitrisa no lehibe indrindra vola antoka ara-bola teo amin'ny tantaran'ny ny oniversite.
Amin'ny Mey 2008, eran-orinasa, Doosan Group, dia voakambana ho toy ny andrim-panjakana fanabeazana, ary Yong-Sung Park no voafidy ho Filohan'ny faha-9 ny Board.
Ny fanendrena ny filoha Park, izay Nifampiraharaha ny orinasa-fanovana ny Doosan Group avy amin'ny mpanjifa ny entana mavesatra orinasa, maneho ny fahaterahana indray ny oniversite. Ao anatin'ny 80 andro nandray birao, ny fivoriana natao ny mpiasan'ny fampianarana amin'ny 27 Aogositra 2008, izay ny CAU2018 Mid-Term + Development dia nanambara drafitra miaraka amin'ny paik'ady vaovao fitarihan'ny "Safidy ny mifantoka, Fanamafisana ny Executive Fahaizana, Fametrahana Tsara Toetra Taona Structure ".
Ny Degree Management System dia hery mba hamporisika ireo mpianatra mba hianatra amim-pahavitrihana, toy mba diplaoma, mpianatra no natao mba hahazo ny sehatra ambany indrindra amin'ny maintsy foto-kevitra toy ny teny anglisy sy ny Kaonty.
Mba ho amin'ny fanohanana io karazana fikarohana, ny fanabeazana sy ny fampiharana amin'ny fomba mahomby kokoa, ny R&D Center for ny College sy ny Pharmacy Dormitories vaovao ho an'ny mpianatra no naorina, ny Central Library nohavaozina, ary ny hopitaly omena mba hifanaraka 300 paroasy fanampiny.
Tetikasa fikarohana ihany koa ho tohanan'ny Komitin'ny manokana ho Fanamafisana Orina ny Research Marketability.
Izany fiovana izany no efa niafara tamin'ny fanendrena ny enina orinasa vaovao teo amin'ny dingana faharoa ny BK21 orinasa, ary ny teti-bola ny KRW 6 lavitrisa raha omena ny tari-dalan'ny fikarohana ekipa, dia toy izany no fanatanterahana ny "safidy sy ny mifantoka" tetika.
Ny rafi-pifidianana mivantana ny filoham-pirenena dia nofoanana, ary nosoloana ny fanendrena rafitra. Noho izany, ny faha-12 ny Filoha, Dr. Bum Park Hee, dia indray-birao voatendry ho toy ny filoha faha-13 misesy.
Ny tetikasa lehibe indrindra ho naharitra ny Dr. Bum Hee Park sy ny fikambanana, dia ny fametrahana ny Hannam Campus. In 2007, ny taratasy iray ny hahazoana hevi-javatra dia nanakalo amin'ny Hannam, ary dia toy izany no fanomanana ny fananganana ny Hannam Campus no mandeha amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny Febroary 2009, Chung-Ang University, ho toy ny andrim-panjakana feno, dia namoaka iray nahazo diplaoma sekoly ankapobeny, matihanina dimy nahazo diplaoma sekoly, 11 nahazo diplaoma sekoly manokana, 18 modularised oniversite ao amin'ny campus manerana an'i Seoul sy Anseong, ary namoaka tanteraka ny 147,196 Licence fiakarana, 29,940 Master ny fiakarana, ary 4,275 Doctorates.
Tamin'ny volana Martsa 2014 Chung-Ang University manaiky nanomboka lalao video mpilalao ho ao an-Department of Science Sport.
Ianao ve mila miresaka momba Chung-Ang University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Chung-Ang University ao amin'ny Map
Photos: Chung-Ang University ofisialy Facebook
Chung-Ang University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Chung-Ang University.